भगवान सँग मेरो प्रार्थना छ, ‘यो महामारीबाट नर्स, डाक्टरलाई बचाइदेउ’ – उजेली न्यूज
प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २१:२९ May 28, 2021
केही वर्ष पहिले मलाई एकजनाले एउटा पुस्तक दिनुभयो ‘सेतो लुगा भित्र कालो मन’। मैंले अचम्म मान्दै के बुक हो ? भनी तत्काल प्रस्न गरें। सर मेरो पीडा र भोगाई हो । तपाईंको व्यक्तिगत पीडा र भोगाई हामीले किन पढ्नु ?
हेर्दा दयनिय अवस्थामा देखिने ती व्यक्ति कुनै ठूलो विपत्तिबाट निस्केको जस्तो देखिन्थ्यो नै। पुस्तक पढ्दै जाँदा रैछ की, उहाँको आमाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कारण यो पुस्तकको सृजना गरिएको ।
उहालाई लागेछ नर्स र डाक्टर ले मेरो आमालाई बचाइदिएनन् । चाहेको भए बचाउन सक्थे। लापरबाही गरे र मेरो आमा मरीन। त्यसैले नर्स र डाक्टर भनेका दुस्मन हुन। मैले पढेका पुस्तक मध्य मन नपरेको पुस्तक थियो त्यो।
तर मलाई के लाग्छ भने उपचारको क्रममा जति मान्छेको मृत्यु हुन्छ ती सबै नर्स, डाक्टरको लापरबाहीले मृत्यु भएको होइन। सबै बिरामीलाई उपचार गरेर बचाउन सकिने भए सायद यहाँ कोही पनि मर्नु पर्थेन होला, कम्तीमा तिनै नर्स, डाक्टरका परिवारका मान्छे कोही पनि मर्थेनन्। अझैं ती नर्स, डाक्टरहरु त झन मर्ने कुरै भएन ।
परीक्षामा छोरो पास भएपछि मेरो छोरो मेहनती छ, मैले खुब लगानी गरेको छु, मेरो छोरो केही गर्छ भन्ने। फेल भयो भयो मास्टर त त्यस्तो छ त्यसले पढाएको छोरो कस्तो होला। यी मास्टरले मेरो छोरो खत्तम पारे भन्ने। यो हाम्रो समाज को प्रतिविम्ब हो।
युद्दमा होमिएको सिपाही, लडिरहेको सिपाहीको पछाडि अरु २,३ जना सिपाही साथी सपोर्ट रूपमा हुन्छन्। उसको गोली सकियो भने गोली पास गर्न, हतियार बिग्रियो भने फेर्न, उसलाई भोक प्यास लाग्यो चिउरा पानी सप्लाई गर्न, घाइते भयो भने उद्धार गर्न, औषधी गर्न, पछाडि साथी खडा हुन्छ। यदि उ मर्यो भने उसको ठाउँबाट लड्न अर्को साथी तयार हुन्छ।
सुन्यौं, एउटा मास्क समेत किनेर लगाउन पर्छ। उसको पछाडि को छ भनौंरु छ त कोरोना। दुई खाले कोरोना। एउटा कोरोना बाट बच्न भ्याक्सिन लगाए, पिपिई लगाउँछन्, मास्क सेनिटाइजर लगाउँछन्।
अर्को खाले कोरोना बाट बच्ने अहिले सम्म न कुनै भ्याक्सिन छ न कुनै पीपिई। मानवरूपी दानवहरु। जो सधैं नर्स, डाक्टरलाई आफ्नो दुस्मन सम्झिन्छन्। उनैले मान्छे मरेको ठान्छन् । उनको पद र पैसाले, मरेको मान्छे पनि बचाइदिन पर्ने जस्तो गर्छन् ।जब डाक्टरले मरेको मान्छे बचाउन नसकिने कुरा गर्छन् अनि डाक्टरलाई झम्टीन्छन्, कुट्छन, पिट्छन्।
यो जोखिम र बाध्यता हामी देख्दैनौं। हामी देख्छौं मेरो बिरामीलाई औषधी खुवाउन ढिला भयो। हामी यो देख्दैनौं एक जना नर्सले ४०,५० जना बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्छ।
उनीहरूको उपचारले को कति बाँचेर गए हामीले उनीहरूलाई कहिलै धन्यबाद सम्म भनेका छौंरु कहिलै सम्मान गरेका छौंरु फूलमाला लगाइदिएका छौंरु मृत्युको मुखबाट झिकेर घर पठाउने यी भगवानलाई कहिलै फलफूल लिएर भेट्न गएका छौंरु अहँ छैन।
Previous: कोरोना बिरुद्ध जनचेतनामुलक टोल समिती गठन
Next: कविता – सरकार तलब नबढा !